Apple dia manolotra fitaovana ho an'ireo mpamorona hanaraka ny lalàna vaovao momba ny angona eropeana | Avy amin'ny mac aho
Apple dia manolotra fitaovana ho an'ireo mpamorona hanaraka ny lalàna vaovao momba ny angona eropeana
Tamin'ny volana Mey lasa manan-kery ny lalàna vaovao momba ny fiarovana ny angona any Eropa. Fantatry ny orinasa izany Olana be tsilo izany ary tsy maintsy mandeha tongotra mitarika. Fa tsy ny orinasa ihany no tokony hitandrina, fa ny mpamorona. Ary Apple dia namoaka fitaovana hanampiana azy ireo hihaona amin'ny lalàna vaovao momba ny fiarovana ny angovo eropeana izay manan-kery amin'ny 25 Mey.
Vao tsy ela akory izay no nianarantsika tamin'i Mark Gurman fa i Apple dia hanolotra ny mpanjifany ny fahafaha-mitantana ny angona mivantana izay voatahiry ao amin'ny lohamilina. Miresaka momba ny fahafaha-mitantana angona izay voatahiry ao amin'ny iCloud toa ny sary, antontan-taratasy, fifandraisana sns izahay. Ary izany rehetra izany tamin'ny alàlan'ny tranokala Apple ID nohavaozina. Na izany aza, misy ny angon-drakitra izay afa-mandositra Apple ary angona voatahiry avy amin'ny antoko fahatelo. Ary amin'ity tranga ity dia te hanampy i Apple mba tsy hanana olana izy ireo.
Apple dia afaka vavahady ao amin'ny tranonkalany manokana izay nanomezana azy ireo andiana fitaovana miaraka amin'ny fomba hanatanterahana ny fangatahan'ny mpampiasa angon-drakitra, ao anatin'izany ny fanondranana andiany, ny famerana ny fotoana, ary ny famafana tanteraka ny fampahalalana voatahiry ao amin'ny mpizara anao. Ary i Apple dia manome API API sy API an-tranonkala ho an'ny mpamorona azy hanamorana ny fidiran'ny mpampiasa amin'ny angon-drakitra voatahiry.
Ary farany, ireo izay avy any Cupertino dia manazava ihany koa ao amin'ity vavahady vaovao ity ny fomba hirosoana raha misy fampiatoana - vonjimaika na tsia - an'ny ID Apple. Araka ny azontsika vakiana, rehefa tsy mandeha amin'ny Apple ID manokana ny mpampiasa mandritra ny fotoana iray, dia tsy tokony hotehirizina intsony ny data mandra-pahavitrin'ny tompony ny kaonty. Ary izany no antony nanomezan'ny Apple ny fahafaha manafoana ny modely CloudKit sasany rehefa misy mpampiasa mangataka azy ary tsy manana olana ara-dalàna ny mpamorona amin'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia manolotra fitaovana ho an'ireo mpamorona hanaraka ny lalàna vaovao momba ny angona eropeana
Fametrahana sy fiasa HomePod, macOS 7 beta 10.13.4, 200GB ao amin'ny iCloud ho an'ny fanabeazana, kojakoja mainty iMac Pro amidy, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ireto ny eGPU izay amporisihan'i Apple hampiasa amin'ny macOS High Sierra